Isisiseko sokuqala seSikhondi seGrade kunye neZakhono
Isiqalo sokuqala seStateboard Gear
Isiqalo sokuqala seStateboard Gear. Steve Cave
Into yokuqala yokuyenza yifumana iibhanti ezifanelekileyo zesikhumba . Ukukhwela kunokwenzeka kwiinqwelo eziqhelekileyo, kodwa kuya kuba nzima kakhulu, kwaye ngamanye amaxesha kuyingozi. Izicathulo ze-Skate zakhiwe ngezantsi ephantsi komhlaba, ukuba zibheke bhetele kwibhodi, kwaye zihlala ziquka ezinye iinkalo ezifana nokuqiniswa kwiindawo apho isihlangu sinokubethwa khona.
Gqoka i Gear Protector
Okwesibini, kubalulekile ukufumana isigqoko . Nangona ezinye iingcingo zingagqoki iinqununu, kubalulekile ukwenza njalo. Enyanisweni, kuyaqhelekile ngoku kwiikhateparks zokufuna iinqununu, kwaye zicaca ngokucacileyo, ngakumbi xa kuqala ukuqala.
Ukugqoka ezinye iipilisi zokukhusela zinokulungileyo, kodwa oko kuyimfuneko kuxhomekeke kukuphi uhlobo lokukhwela. Ukuba uzama ukwenza amaqhinga kwi-driveway, i-elbow pads ingaba yinto efanelekileyo, kodwa iidolokhwe zodolo kuphela ezifunekayo xa zikhwela kwi-ramp okanye zizama amaqhinga. Iibhondi zentsimbi zinokuba mnandi, kodwa kucetyiswa ukuba uqaphele ukuba ungasetyenziselwa ukusebenzisa izandla xa uwa.
Ukuma kwi Skateboard
Ukuma kwi Skateboard. Steve Cave
Okokuqala, kubalulekile ukuba ukhululeke ngokuma kwi-skateboard. Ukuba i-skateboard ibolekekile okanye iqukethe ivenkile ethengiweyo, i-skateboard epheleleyo esele yakhiwe, kukho ithuba lokuba kukho izinto ezinokuthi zingabonakali.
Beka ibhodi ngotshani okanye kwiphephethi kwigumbi lokuhlala, uze uzame ukuma okanye ugxume kuyo. Zama ukulinganisa kumasondo angaphambili okanye ngasemva kuphela. Yima ebhodini kwaye uhambise iinyawo zombini kwiindawo ezahlukeneyo. Sifumana ukuvakalelwa kunye nobukhulu bebhodi, kwaye ukhululeke ngokuma kulo.
I-Skateboard Stance: Goofy kunye rhoqo
Skateboard Stance, Goofy vs rhoqo. Steve Cave
Mbonise ukuba ngaba i-skateboard yeyona ndlela ifanelekileyo ye-skateboard ihamba kakuhle okanye ihamba ngeenyawo. Oku kuhla isigqibo somntu siqu sokuba ngaba ukukhwela i-skating kufanele yenziwe ngokufanelekileyo ngonyawo onyawo okanye ngasekhohlo ekuhambeni, kwaye utshintsho lwabantu ngabanye.
Faka iNyawo Lakho Elimnandi Ngaphambili
Ekugqibeleni, kuhla kwizinto eziziva zikhululekile. Kanye njengokuba abanye abantu banikezelwa ngokufanelekileyo okanye bashiyekileyo, abanye baya kusebenzisa unyawo lwabo lokunene okanye lwesobunxele, okanye bawaguqule ngaphandle.
I-Goofy ikhupha ngeenyawo zokunene, ngelixa lihlala likhwela ngeenyawo. Kukho iindlela ezininzi zokucinga ukuba yintoni evakalelwa yintuthuzelo ebhodini lakho.
I-Skateboard Umqali wokuqala. Steve Cave
Ukugxotha i-skateboard kubandakanya ukuthatha i-skateboard ukuya kwelinye i-pavement okanye ikhonkrithi kwindawo ethile. Kunconywa indawo yokupaka engenanto ngaphandle kweemoto okanye abantu abajikelezayo. Ngoku, ixesha lokuba ukhululekile ebusweni apho ibhodi iyakwazi ukuhamba.
Fumana i-Skateboard yakho yokuqhawula
Okokuqala, zama ukuhamba ngeenxa yokupaka. Thatha inyawo lakho langaphambili, uze ulibeke ukuze iinzwane zakho zilungile phezu kweloli ngaphambili, okanye encinane emva kwayo, phezulu kwebhodi.
Sebenzisa unyawo lwakho lokubuyela emva ukuze uqhube kunye ne-skateboard iqala ukugqithisa, kwaye ubeke umqolo wakho wempuphu kwi-skateboard, xa ujikeleza isantya ofuna.
Xa unciphisa, susa ezinye ngeenyawo zakho.
Ukujika, ukuba uyahla, ungancika kwisalathiso ofuna ukuyijika, kodwa oku kuya kukuguqula ngokukhawuleza. Indlela engcono yokujika ikulinganisela umzuzu wokuhlukanisa kumavili akho omva kwaye uguqula amasondo akho phambi kwinqununu ofuna ukuyifumana. Oku kungathatha isenzo.
Thatha ixesha lakho lokuFunda
Kubalulekile ukuba ukhululeke ngokukhwela ngapha nangapha. Ukuchitha ixesha elithile, njengoko kuya kukunceda ufunde.
Emva kokuba uzive ulungele ukugibela okunje, zama ukunyamekela phantsi entabeni elula engenazo izithuthi. Sebenzisa ixesha lokufunda ukukhwela. Ukukhwela i-skating kungaqhutyelwa kwiipaki zeendawo ze-skate, kwaye kunokunceda abaqalisi ukuba bahambe ngaphambili xa kukho abantu bambalwa.
Indlela yokuma kwi-Skateboard
Indlela yokuma kwi-Skateboard. Adam Squared
Emva kokuba wazi indlela yokuhamba kwi-skateboard, kubalulekile ukuba ufunde indlela yokuyeka.
Iindlela ezine zokuma xa i-Skateboarding
Ukwaphuka kweenyawo: Indlela elula kukukhupha inyawo lakho lokubuyela kwaye ulidonsa phantsi. Kuthatha uqeqesho; i-skaters kufuneka ichithe ixesha elijolise kuyo ngoku phambi kokuba lifuneka ukuze banqume xa kuyimfuneko.
Isithendu Gxuma: Oku kuthatha isenzo, kodwa yindlela eqhelekileyo yokumisa nabantu abaye baqhankqalaza ixesha. Beka isithende senyawo sakho sokubuya ukuze unamathele emva kwe-skateboard yakho kwaye uncike emva ukuze ibhodi yangaphambili ifike phezulu emoyeni. Emva koko, nyathela kwisithende sakho, kodwa qiniseka ukuba isiqingatha sangaphambili senyawo lwakho kusekho ebhodini. Isithende sakho kufuneka sidonsa indlela emfutshane, kwaye kufuneka umise. Kuqhelekile ukuwa emva kwakho amaxesha ambalwa kwaye uqalise ibhodi phambi kwakho xa ufunda.
Isilayidi samandla : Iipowerslides zithandwa kwiimidlalo zevidiyo zeTony Hawk, kodwa zihambela phambili. Nangona oku kukhangeleka, akukhuthazwa ngabaqalayo.
Bhekisa: Xa zonke izinto zingaphumeleli, gxuma nje ebhodini. Xa amavi akho egobile ngelixa ukhwela, oku akufanele kube nzima. Ukuba uqaqa phambili, i-skateboard yakho iya kudla ukuyeka. Ukuthenga i-skateboard entsha kukuncinci kwaye kulula kunokufumana ingalo ephukileyo okanye ubuso obutsha.
Indlela yokuCoca kwi-Skateboard
Ukuqhawula konke kukuxhomekeke kwi-toeside okanye kwi-heelside ukuze ibhodi iphendule kuloo ndlela.
Okokuqala, chukumisa ibhodi yakho kwaye ubeke ubunzima kwizithende zakho ngelixa ujikeleza. Oku kuya kukuvumela ukuba uphenduke ngokukhawuleza kuloo ndlela. Unzima kakhulu ukunyusa kwizithende zakho, ubude bakho buya kuba nzima.
Ngoxa u-skating ujikeleze, uya kusebenzisa le nto. Kunconywa ukuba uphume kwisitrato okanye kwindawo yokupaka kwaye uzama ukuqhubela phambili kwaye udwebe izinto. Ngokomzekelo, zama ukunyusa ngokufanelekileyo kwinto ongazifuni ukuyifaka, njengengqongqelo, kwaye ubone ukuba unokwenza ujikeleze okanye ude kuyo.
Ukuba uthembela emzimbeni wakho ongasentla kwinqununu ofuna ukuyifaka, uza kuyifumana kulula. Ukudweba kwi-skateboard kuyafana kakhulu nokudweba kwi-snowboard. Ukuba ufuna ukuguqula ngokukodwa, zama ukuguqa ngamadolo akho, kwaye uqubude phantsi ebhodini lakho. Ukuqhafaza kulula kwi-boardboard ende, kodwa kuyinqobo ebalulekileyo kwimidlalo yebhodi.
Indlela yoLwazi kwi-Skatepark, kunye nokuPhumelela
Indlela yokuPhupha kwiSikatepark. UMichael Andrus
Ukusebenzisa i-skateboarding encinane kwisitrato okanye kwindawo yokupaka ihluke kwi-skating phezu kwee-ramps, phantsi kwethambeka, okanye kwi-skatepark.
Ngezinye izikhathi i-curping curves ye skatepark ibizwa ngokuthi "ukuhamba". I-Skateboarding phezu kokuhamba, kunye nokuhla kunye namanqabunga kunye nemizila, yinto encinci. Isihluthulelo sokuqala ukugcina ubunzima bakho phambi kwenyawo. Xa ugibela ngaphaya kwenkunzi enkulu, wehla entabeni, phantsi kweendlela, okanye nge-skatepark, kubalulekile ukugcina ubunzima bakho kwinqanaba langaphambili. Hlaziya xa wenza njalo uze uqinisekise ukuba akukho zimoto okanye abantu basendleleni.
Dlulisa u bunzima bakho
Kukho inkohliso enye kwesi sikhiye: xa ukhwela uphahla okanye umthambeka, yimise, uze uhlehlise phaya e- fakie , inyawo lakho langaphambili litshintshile. Oku kungenxa yokuba inyawo lakho langaphambili alisoloko lilungelo lakho lokunene okanye elisekhohlo, ngokwenene unyawo olujongene nesikhokelo oya kuso. Xa ukhwela kwinqanaba okanye intaba kunye nokuhla kwe-fakie, uya kufuna ukudlulisa ubunzima bakho ukusuka kwelinye unyawo ukuya kwelinye icala phezulu.
Isitshixo sesibini kukuba uguqa amadolo akho kwaye ukhululeke njengoko unako. Oku kuya kunceda umzimba wakho ufumane ukutshitshiswa kunye nempembelelo yezibonda kunye noshintsho. Njengomgaqo omkhulu kwi-skateboarding, xa ukhululekile kwaye uguqa amadolo akho, bhetele uya kukhwela. Musa ukutshitshisa amahlombe akho kakhulu, kwaye uzame ukuzigcina kwaye uzikhulule.
Indlela yokukhawuleza kwi-Skateboard. Umfoto: uMichael Andrus
Emva kokuba uzive ukhululekile ngokuyeka, ukuqala, kunye nokudweba, lixesha lokuba uqale ukuqhuba ukukhahlela. Ukufunda indlela yokukrazula kubalulekile.
Ukukhwabanisa xa ulungelelanisa amasondo akho emva komzuzwana kwaye uguqula phambili ebhodini lakho ukuya kwicandelo elitsha. Kuthatha ukulinganisela kunye nokusebenza.
Emva kokuba ukhawuleza, qiniseka ukuba unokukhahlela kwimiba yomibini. Zama ukukhahlela xa uhamba kwaye ngexa ujikeleza. Ngokomzekelo, phakamisa phezulu kwaye ukhawule 180.
Ukufumana I-Hurt Skateboarding ne-Back Up Up
UJake Brown emva kokuwa kweenyawo ezingama-50. Ukufumana I-Hurt Skateboarding ne-Back Up Up. U-Eric Lars Bakke / i-ESPN Izithombe
I-Skateboarding ingaba yimidlalo ebuhlungu ukuba ifunde. Kuyinto eqhelekileyo ukulimala ngelixa u-skateboarding. Unokugqoka iipads kuwo wonke umzimba wakho, kodwa uya kuwa, kwaye mhlawumbi uzakhathazeka ngaphambi kokuzibamba. Ngaphandle kokugqoka isigqoko kunye neepads, kukho ezinye izinto onokuzenza ukukunceda ukunciphisa umonakalo.
Ungayisebenzisi Iizandla Zakho
Xa uwela, zama ukungazisebenzisi izandla ukuze uzibambe. Ukuba ulahlekelwa ibhodi yakho kwaye uza kutshabalala emhlabathini, kufuneka uzame kwaye uvumele ihlombe lakho nomzimba ukuba lithathe, ukuxubha ngokutsha njengokuba unakho.
Ukuzibamba ngesandla sakho yindlela enhle yokuphula isandla, kwaye ngelixa ukugqoka iilindi zesikhonkwane kunokukukhusela kule nto, kuyingozi ukuba usebenzise ukusetyenziswa kwezandla zakho kuba ngezinye iindawo uza kukhwela ngaphandle kwee-walindi.
Into engcono ukuba uyenze xa ulwaphuka kukuba uvuke, ukuba unako, uhambahamba uze uguqulwe. Njalo xa uwela, umzimba wakho uya kufunda ukuphepha ukwenza kwakhona. Akufanele uzuze kakubi kakhulu kwi-skateboarding, kodwa amathambo aphukile aqhelekileyo. Ukuba ucinga ukuba uphule ithambo okanye ulimaze into engalunganga, yenze ihlolwe.
Skate kwaye Yakha
Skate kwaye Yakha. I-Credit Credit: uMichael Andrus
Emva kokuba ukhululekile ngokuhamba ngeenxa zonke, mhlawumbi ufuna ukufunda ezinye iindlela. Nazi ezinye iindlela ezilungileyo zesitrato zokufunda ezilandelayo:
U-Ollie : Uninzi lwabadlali bezentsimbi bazama ukufunda le ntshutshiso kungekudala, kodwa kubaluleke kakhulu ukukhohlisa.
I-Pop Shuvit : Le nto iqhinga lokufunda kunye ne-ollie kuba ithatha isethi sezakhono ezahlukeneyo.
Umqulu : Inkohliso yencwadana iya kukunceda usebenzise ibhalansi. Unokudibanisa iincwadi kunye namanye amacebo.
Izitampu Zomzila : Ngamanye amaxesha ubizwa ngokuba yi-Primo, eli qhinga libi kunokuba libukeka.
Kukho amaqhinga amaninzi ukuzama ukukhawuleza, njengokukhawuleza, ukugaya, kunye neengcungca zeepaki kunye nemizila. Funda ngesantya sakho, ujabule kwaye uphumule.
Indlela yokubhala kwi-Skateboard
Indlela yokutshintshwa kweebhanti ze-Skateboard
Zen 101: Isingeniso esifutshane kwi-Zen Buddhism
Isikhokelo Sokuhamba Emva Kwemnyama Yamnyama kunye ne "8 Iifrimu Zokufa"
Sophie Kinsella Iifilimu
Iingoma ezi-10 ezidlulileyo zeeNgxelo zee-2011